THE COAT OF ARMS (Xhosa)
UBishophu u-Adam ngumntu osoloko ezigcine ngendlela eyiyo ngakwezomoya, ekholwa ukuba idini eliNgcwele ngumthombo wobukho buka Krestu ebomini bakhe naseTyalikeni ngokubanzi. Uphawu lwakhe olu luqaqambisa olu kholo-mongo IwamaKatolike yaye lukhomba ekuhlonipheni kwakne iSakramente eNgcwele kanye yesibingelelo njengesikhumbuzo semihla ngemihla sothando uThixo alunika uluntu ngoNyana wakhe uYesu Krestu.
Umsebenzi wezandla wesiAfrika esiwubona kwindebe nakwiSakramente ezisembindini, zikhombisa unxulumano nobume bomhlaba kuMzantsi Afrika beDayosisi yakhe kwanendyebo yenkcubeko yakwantu uBishop Adam azimisele ukuyixabisa enkonzweni yakhe.
Intlanzi esiyibonayo sisibonakaliso samandulo samaKrestu sokuba ukholo lusekelwe kuYesu Krestu, nto leyo uBhishophu azimisele ukuqhubeka ayakhe kwiBandla lakhe. Umnqamlezo onentliziyo luphawu losindiso lukaKrestu yaye iyenye yezinto ezibalulekileyo kwintlalo yezomoya yabaPriste beNtliziyo eNgcwele kanye kaYesu uBhishophu Adam azithabathele yona.
Ubomi bakhe bokuzibopha, ubupriste nobuBhishophu, zontathu ezi zinto kufuneka zibonwe njengesimemo esisoloko simi kwimpendulo yobizo luka Thixo njengoko idandalazisiwe kwisaci esithi "Ecce venio - Ndim lo, ndizokwenza imtando takho" (Heb. 10:9). I-Ecce Venio le sisibonakaliso sokuzimisela kwakhe nokulungela ukunyamezela intando kaThixo amkhonzayo njengomalusi womhlambi kaKrestu.
Kucace gcaa ke ngoko ukuba zonke ezi zinto zibalulwe kolu phawu yimiba ebalulekileyo kubudlelane bukaKrestu nebandla nakubudlelane babantu omnye nomnye. Ziqhubela phambili ke ngoko ukukhuthaza nokubumba ubomi bomthandazo kwanomsebenzi kaBhishophu omtsha.
UBhishophu u-Adam ke ngoko unqwenelela wonke amakholwa eDayosisi yase De Aar ukunyaniseka okugqibeleleyo kwisondlo sikaKrestu esinika ubomi nobunye.